के ज्याकलिनका कारण ब्रेकअप भयाे आलिया र सिद्धार्थको ? – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ के ज्याकलिनका कारण ब्रेकअप भयाे आलिया र सिद्धार्थको ?
के ज्याकलिनका कारण ब्रेकअप भयाे आलिया र सिद्धार्थको ?
पुलेसो ८ भदौ, २०७८, मंगलबार १४:२८
बलिउड बजारमा कलाकारको प्रेम, ब्रेकअपदेखि पहिरनको चर्चा सर्वाधिक धेरै बलिउडमा हुने गर्दछ । अहिले, बलिउड नायक सिद्धार्थ मल्होत्रा र नायिका आलिया भट्टविचको ब्रेकअपका कारण मिडिया तातेका छन् । सिद्धार्थ, आलियाबाट टाढा हुनुको कारण नायिका ज्याकलिन फर्नान्डेजलाइ मानिएको छ ।
ज्याकलिन र सिद्धार्थविचको प्रेमका कारण आलिया टाढा भएकी हुन् भन्ने गसिप मिडियामा छाएको छ । तर, चर्चित बलिउड अनलाइन बलिउड हंगामाका अनुसार आलिया र सिद्धार्थको प्रेममा कुनै पनि खटपट भएको छैन । सिद्धार्थ र ज्याकलिन अभिनित चलचित्र ‘जेन्टलम्यान’ आउँदो शुक्रबारबाट रिलिज हुँदैछ ।
यो चलचित्रको प्रचारका लागि आलिया र सिद्धार्थको ब्रेकअप ज्याकलिनका कारण भएको चर्चा गरिएको बलिउड हंगामाले लेखेको छ । अघिल्लो चलचित्र ‘बार बार देखो’ असफल भएका कारण सिद्धार्थ जसरी पनि यसपटक हिट हुने धुनमा छन् । यसैले पनि उनी, आलियासँगको प्रेमबाट चलचित्रको रिलिज समयसम्म टाढा रहन चाहन्छन् । ज्याकिलन आफ्ना लागि नायिकाको रुपमा फिट भएको सिद्धार्थको वुझाइ छ ।